Soogalootiga leh aqoonta yar ee Jarmalka waxay u baahan yihiin taageero xagga xiriirka xagga maamulka, caafimaadka, waxbarashada iyo meelaha bulshada ama adduunka shaqada. Isla mar ahaantaana, hay'adahan "bulshada martida loo yahay" waxay sidoo kale u baahan yihiin adeegyo dhexdhexaadin luqadeed iyo dhaqan si ay u awoodaan inay u fuliyaan howlahooda bulshada hijrada. Koorso ay ansaxisay Rugta Wershadaha iyo Ganacsiga ayaa la sameeyay 2016 si ay xirfad ugu yeeshaan howlaha dhexdhexaadinta luqadaha. Koorasku wuxuu markaa u beddelaa dadka ku hadla luqadaha badan inay noqdaan khabiiro si xirfad leh u taageeri kara soogalootiga / qaxootiga iyo xarumaha bulshada ee xagga isgaarsiinta.
Sida "turjubaan bulshada" ah, waxay raacaan dadka, ku turjumaan wadahadallada waxayna tarjumaan dukumiintiyada haddii loo baahdo. Koorsadu waxay siinaysaa karti si ay hawlahan u fuliso si xirfad leh. Si taas loo gaaro, kaqeybgalayaashu waxay helayaan aqoon ku takhasustay aasaas wanaagsan oo heer sare ah waxayna ku dabaqaan tan macnaha guud ee laylisyada tababbarka degdega ah. Waxyaabaha ay ka kooban yihiin cutubyadu waa kuwo si dhaw isula xidhiidhay waxaana loo fuliyaa qaab wax ku ool ah oo qaab laxiriira laxiriirta. Khibradii hore iyo aragtida kaqeybgalayaasha ee nashaadaadku marwalba way ku jiraan.
Kaqeybgalayaashu waxay aasaaseen "Kultur- und Sprachmittler e.V." si loo hubiyo in dhexdhexaadiyeyaasha luqadda ay sidoo kale leeyihiin aragti xirfad leh.
Ururka waxaa la aasaasay isla markii ay dhammeeyeen tababbarkii sanadkii ugu horreeyay 22-kii May, 2017. Xaaladda aan macaash doonka ahayn waxaa hubiyay xafiiska canshuuraha iyo qawaaniinta ururku waxay ka diiwaan gashanaayeen maxkamadda degmada Mainz markay ahayd Oktoobar 12, 2017 markii ururka la diiwaangeliyay.